वर्षायाममा एसिडिटीको समस्या र घरेलु उपचार !! | सुदुरपश्चिम खबर
हाम्रो पेटमा बन्ने एसिड वा अम्ल त्यस भोजनलाई पचाउने काम गर्छ, जो हामी खान्छौ । तर, कतिपय अवस्थामा पचाउनका लागि पेटमा पर्याप्त भोजन हुँदैन वा एसिड आवश्यक मात्राभन्दा बढी बन्छ । यस्तो एसिडिटी वा अम्लताको समस्या हुन्छ । खासगरी मसलेदार खानेकुरा एसिडिटीको कारण बन्ने गरेको छ । यस्तो खानेकुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ र एसिड पैदा गर्ने कोशिकाले आवश्यक्ताभन्दा बढी एसिड बनाउनका लागि उत्तेजित गर्छ ।
–अनियमित तरिकाले खानेकुरा सेवन गर्नु ।
–मसलेदार खानेकुरा बढी सेवन गर्नु ।
–काम वा अत्याधिक दबाब वा पारिवारिक तनाव लामो समयसम्म रहयो भने शारीरिक तन्त्र प्रतिकूल ढंगले काम गर्न थाल्छ । र, पेटमा एसिडको मात्रा आवश्यक भन्दा बढी बन्छ ।
–विहान उठ्नसाथ मनतातो पानी सेवन गरौ । रातभर पेटमा बनेको आवश्यक्ताभन्दा बढी एसिड वा अनावश्यक तत्व पानीको माध्यामबाट शरीर बाहिर निस्कन्छ ।
–केरा, तरबुजा, मेवा, कांक्रा जस्ता फलफूल खानेकुरामा सामेल गरौ । यी फलको रस एसिडिटीको उपचारमा प्रभावकारी हुन्छ ।
–यदि कसैलाई एसिडिटीको समस्या छ भने नरिवल पानी लाभदायक हुनसक्छ ।
–अदुवाले पाचन क्रियालाई राम्रो बनाउँछ ।
–भोजनको अम्लिय प्रभावलाई दुधले पूर्ण रुपमा निष्प्रभाव बनाउँछ । यद्यपी एसिडिटीको उपचारको लागि दुध लिनुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । किनभने कतिपय व्यक्तिमा दुधले एसिडिटी बढाउन पनि सक्छ ।
–कार्बोहाइड्रेटले भरपुर खानेकुरा जस्तो कि चामलले एसिडिटी रोक्छ । किनभने यस्तै भोजनको कारण पेटमा एसिड कम मात्रामा बन्छ ।
नियमित व्यायाम र ध्यान क्रियाले पेट, पाचन यन्त्रलाई चुस्त, तन्दुरुस्त राख्छ । त्यसैले नियमित रुपमा व्यायाम गर्नुपर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
खानेकुुरा पकाउने तरिका नमिल्दा हुनसक्छ एसिडिटीको समस्या !!